1. Le ngcaciso imfutshane yazisa zonke iinqununu ukuba iOfisi kaNondyebo kaZwelonke (National Treasury) seyingene kwikhontrakhi entsha enguzwelonke (transversal contract) ukunika iinkonzo zekhuriya onke amaphondo.
2. Umboneleli-nkonzo ngekhuriya omtsha ojongene neenkonzo zekhuriya eNtshona Koloni, ngokukodwa ukuthumela ngekhuriya izinto zokubhala uviwo, nguCourierIT SA (Pty) Ltd.
3. Ikhontrakhi neSkynet SA (Pty) Ltd iphele nge-31 Januwari 2017. Kucelwa iinqununu ngoko ke ziqinisekise ukuba akukho zinto zinxulumene neemviwo zithunyelwa eWCED ngeSkynet emva kwe-31 Januwari 2017, njengoko izikolo ziya kunyanzeleka ukuba zihlawule iindleko zoko. ICourierIT, njengekhampani yekhuriya entsha, iya kusingatha uxanduva lokuzisa amaphepha emibuzo oviwo nokuza kuthatha iincwadi zeempendulo zoviwo ukususela nge-01 Februwari 2017.
4. Abaqhubi beCourierIT nabancedisi babo baya kuqapheleka ngokuthe gca ngeepemithi kwanamakhadi okuzazisa. Ipemithi nekhadi lokuzazisa maliboniswe inqununu xa kuziswa amaphepha emibuzo naxa kuzokuthathwa iincwadi zeempendulo zoviwo.
5. Ngayo nayiphi eminye imibuzo kucelwa ungathandabuzi ukuqhagamshelana nala magosa eWCED alandelayo:
Nks Shelva Willoughby kwifoni 021 467 2923
Mnu Clive Berry kwifoni 021 467 2265
Mnu Errol van Breda kwifoni 021 467 2987.